‘नबु ,मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा हुर्केको छ....'
काठमाडौं । जाजरकोटबाट बेहुली लिन रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८,सोती गाउँ गएका १९ जनामध्ये पाँचजना आफैँ पनि सकुशल फर्कन सकेनन् । तर, जिउँदो नफर्के पनि भेरी नदीले बगाएर उनीहरूको लाशलाई आफ्नै जिल्ला जाजरकोट नै पुर्याइदियो ।
लाशको पोष्टमोर्टम जाजरकोटको जिल्ला अस्पताल र सदगत समेत जाजरकोट मै पर्ने भेरी नदीको तीरमा भयो । उता बेहुली बन्न तयार सत्र बर्षकी किशोरी भने बाबू आमासङ्गै यतिबेला पूर्वी रुकुमको प्रहरी हिरासतमा छिन् !
युवतीले पठाएको म्यासेजमा आफू गर्भवती भएकाले एक्लै होइन, हुल बाँधेर लिन आउन नवराजलाई अह्राएकी थिइन् । आफू एक्लै आउँछु भन्ने प्रेमीलाई होइन, साथीहरू सहित लिन आऊ भन्ने किशोरीले केटाहरु बीचबाटो नपुग्दै आफ्नो मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कबिहिन भैदिइन् ।
उता जाजरकोटमा मृतकमध्ये तीनजनाको शव पोष्टमोर्टम गरेर जलाइ सकिएको छ । तर,मेडिकल रिपोर्ट भने अझै आएको छैन । सम्भवतः उच्च राजनीतिक दबाबका कारण रिपोर्टमा ढिलाई भएको आशंका गरिएको छ ।
अनौपचारिक रूपमा बताइएअनुसार सबैको टाउकोमा गहिरो चोट र शरीरभरी नीलडाम देखिएको छ । यसले कुटपिट र ढुंगामुढापछि उनीहरूलाई भेरीमा फालिएको आशँकालाई बल मिल्छ । यस्तो चरम यातना दिएर मान्छे मार्नेसम्मको हर्कत गरेका आरोपितहरूलाई कुन कानुनबमोजिम कारबाही होला ? जनआस्था साप्ताहिक